अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएपछि कस्तो बन्ला क्षेत्रीय शक्ति समीकरण ?
काठमाडौं । अमेरिकाले आउने सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अफगानिस्तानमा खटिएका सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेसँगै अब कस्तो परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले तालिवानसँग आगामी मे १ सम्ममा सेना फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो ।
वर्तमान राष्ट्रपति जो बाईडेनले समेत ट्रम्प प्रशासनकै सहमतिलाई निरन्तरता दिँदै सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै सेना फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यहाँनेर संयोग के भयो भने, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले जुन सभा हलबाट आतंकवादविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका थिए त्यही सभा हलबाटै बाईडेनले सेना फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । अफगानिस्तानमा करिब ३ हजार अमेरिकी र ८ हजार नेटो सेना रहेका बताइन्छ ।
अफगानिस्तान प्रवेश गरेको २० वर्षपछि अमेरिकी सेनाको स्वदेश फिर्ती हुन लागेको हो । अमेरिकी सेना यति लामो समय अन्य मुलुकमा बसेको अमेरिकी इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । अमेरिकी सेनाको फिर्तीलाई कतिपयले अमेरिकाको पराजयको रुपमा समेत अथ्र्र्याएका छन् ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना प्रवेश
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा विद्रोही समूह अल कायदाले न्यूयोर्कस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टर (ट्वीन टावर)मा हमला गर्दा करिब तीन हजार मानिसको मृत्यु भयो । ९–११ को हमला भनेर चिनिने त्यो अतिवादी हमलामा थप ६ हजार बढी घाइते भए । अल कायदाले चार वटा हवाईजहाज नियन्त्रणमा लिएको थियो । तिमध्ये दुईटा ट्वीन टावरमा र एउटा पेन्टागनमा ठोक्काइएको थियो भने अर्को एउटा जहाजका यात्रुले प्रतिवाद गर्न खोज्दा जमिनमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।
त्यो आक्रमणमा मुख्य योजनाकार अल कायदा प्रमुख ओसामा विन लादेन रहेको भन्दै अमेरिकाले लादेनलाई आफुसमक्ष बुझाउन अफगान सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । र, अफगानिस्तानमा मुख्यालय बनाएर बसेको अल कायदाका प्रमुख विन लादेनलाई तालिवानले संरक्षण गरेको आरोप लगाइरहेको थियो, अमेरिका ।
तालिवानले अमेरिकी आग्रह अस्वीकार गरेपछि हमला भएको महिना दिन लगत्तै बुस प्रशासनले अक्टोबर ७ का दिन अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना पठाउने निर्णय ग¥यो । २० वर्ष अफगानिस्तान बसेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि यो क्षेत्रमा कस्ता घटनाक्रम विकसित होलान् ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
पहिलेको तुलनामा संघर्ष कम भए पनि अफगान सरकार र तालिवानबीच वार्ता हुने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन । बाईडेन प्रशासनले सेना फिर्तीको समय सीमा सेप्टेम्बर ११ सम्म लम्ब्याउँदा दोहामा भएको सहमति उल्लंघन भएको तालिवानको बुझाई छ । ट्रम्प प्रशासन र तालिवानबीच भएको सहमति अनुसार मे १ सम्म अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने हो । यसैलाई कारण देखाएर तालिवानले सरकारविरुद्ध युद्ध गर्ने सम्भावना जीवितै छ ।
लङ वार जर्नल फाउन्डेसनका अनुसार अफगानीस्तानको करिब १९ प्रतिशत भू–भाग तालिवानको नियन्त्रणमा छ भने ३२ प्रतिशत क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा छ । बाँकी क्षेत्रमा नियन्त्रणका लागि दुबै पक्षबीच संघर्ष हुँदै आएको छ ।
अमेरिकाको वैदेशिक सम्बन्ध परिषद्का अनुसार तालिवान सन् २००१ पछि हालसम्मकै शक्तिशाली बनेको छ । अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुलाई विजय मानेको तालिवानले सरकारमाथि आक्रमण गरी सत्ता कब्जा गर्ने प्रवल सम्भावना देखिएको अमेरिकी थ्रेट एसेसमेन्ट रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपि, पछिल्लो २५ वर्षमा तालिवानको दृष्टिकोण केही परिवर्तन भएको पनि बताइन्छ ।
क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा परिवर्तन
अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि तालिवानलाई पाकिस्तानले सुरक्षा दिएको थियो । तालिवानको उदयमा पाकिस्तानको हात रहेको पनि बताइन्छ । ट्रम्प प्रशासनसँग तालिवानको सम्झौता समेत पाकिस्तानको सहयोगमा भएको देखिन्छ । यस्तोमा अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको प्रभाव बढ्नेमा कुनै शंका छैन । अर्थात्, अफगानिस्तानमा भारतको भूमिका कम भएर जानेछ ।
अफगानिस्तान जुन पक्षको पकड भए पनि चीनको फाइदा भने यहाँको स्थायीत्वमा मात्र देखिने बताइन्छ । अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थायीत्व हुँदा चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सम्पन्न गर्न सहज हुने धेरैको अड्कल छ । यस्तै, अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिने चीनको सिन्जियान प्रान्तमा समेत शान्ति कायम हुने देखिन्छ । यद्यपि, भारतसँग भन्दा पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले तालिवानको उदयले चीनको समेत अफगानिस्तानमा प्रभाव बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरुको आँकलन छ ।–एजेन्सीको सहयोगमा
नयाँदिल्ली । भारतको महाराष्ट्रमा आउँदो जुन १ तारिखसम्मका लागि ‘लकडाउन’को अवधि बढाइएको छ । अन्य राज्यबाट आउनेहरुका लागि नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट... ८ घण्टा पहिले
लन्डन । कोरोनाभाइरसविरुद्ध एष्ट्राजेनिका र फाइजर खोप मिसाएर लगाएका व्यक्तिहरुमा हल्का र मध्यमखालको असर देखिने सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको... ८ घण्टा पहिले
जेरुसेलम । गाजामा इजरायलले गरेको हवाई हमलामा आफ्ना वरिष्ठ कमान्डरहरु मारिएपछि विद्रोही संगठन हमासले इजरायलमा दर्जनौँ रकेट प्रहार गरेको छ... ११ घण्टा पहिले
मधुकर अधिकारी वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी सिनेटअन्तर्गतको वैदेशिक मामिला समितिमा बुधबार नेपालमा कोरोनाभाइरसले पारेको असरका बारेमा छलफल भएको छ । कोभिड–१९ महामारी... १२ घण्टा पहिले